Maxaa looga hadlayaa Kulanka Baarlamaanka? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maxaa looga hadlayaa Kulanka Baarlamaanka?
Tuuryare 17 April 2019
Maanta oo Arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay 17/4/2019 ayaa lagu wadaa in Xildhibaannada Golaha Shacabka ay yeeshaan kulankoodii caadiga ahaa, iyaga oo uga hadli doono qodobo muhiim ah.
Kulanka Maanta ayaa waxaa looga hadli doonaa laba Ajende kuwaas oo kala ah Warbixinta guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka iyo Akhrinta koowaad ee sharciga wax ka bedelka furdooyinka.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa xalay loo diray fariimo wargelin ah oo ku saabsan kulanka Maanta,waxaana xusid mudan in Sabtidii iyo Axadii todobaadkaan ay Xildhibaanada siweyn uga hadleen Arrimo la xiriira Amniga.
Sidoo kale Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa waxaa horyaalla Ajendayaal dhowr ah oo u baahan ka doodis ama in ay ansixiyaan halka kuwa kale ay qaarkood horay u soo marsiiyeen Akhrinta koowaad iyo tan labaad, hayeeshee u baahan kaliya inay waxka bedelaan ama ay ansixiyaan.
Howlgal laga fuliyey Muqdisho
Ciidanka Kenya oo lagu beegsaday weerar xoogan (AKHRISO)